5 Best Day Njem Iji Njem Site Train Site Paris | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Day Njem Iji Njem Site Train Site Paris
Na-eche echiche nke na-pụọ maka ụbọchị ole na ole? Gịnị banyere atụmatụ ụfọdụ ụbọchị njem gaa ụgbọ okporo ígwè si Paris? French ụgbọ oloko na-a ngwa-ngwa, mfe, na eco-enyi na enyi ụzọ na-na na France. na Save A Train, ị ga-enwe ike ka akwụkwọ na nkeji na-enweghị kwukwara ụgwọ, oke! Akara!
Paris na-nnọọ nke ọma ejikọrọ na niile nke France na ekele TGV ụgbọ oloko (Zụlite a Grande Vitesse) ụfọdụ nke 5 kacha mma ụbọchị njem site Paris kwere omume na 4 awa ma ọ bụ obere! Nke a bụ nyocha anyị na njem ị kwesịrị ịtụle ime mgbe ị na -aga Paris.
1. Njem Iji Njem Site Train Marseilles (Provence-Alpes-Cote d'Azur)
Ọ bụrụ na ị na-achọ a anwụ na-acha getaway si Paris, Marseilles bụ ebe ọ ga-. Mma ihe ngwa ngwa ezie, na anwụ na-acha ụbọchị ga-abịa na njedebe n'oge na-adịghị. Marseilles anya anya na map ma Paris na Marseilles bụ naanị 3.5 awa ụgbọ okporo ígwè na TGV. Marseilles, na Provence-Alpes-Cote d'Azur region, bụ akụkụ nke French Riviera. Ọtụtụ ndị gara Marseilles ngwa ngwa na ụzọ ha na Corsica Island ma obodo ahụ bụ a jụụ ebe inyocha na ya.
Mere ị ga-gaa na Marseilles?
The weather na Marseilles dị ukwuu plus e nwere nza nke ihe na-ahụ ma na-eme obodo. Central Marseilles ụtụtụ ọtụtụ ndị nlegharị anya nke obodo, dị ka ọmarịcha Old Port. Marseille nnukwute akụkụ anọ ọdụ ụgbọ mmiri e erekwa maka 2,600 afọ na ọzọ bụ nke a dum district karịa otu n'anya.
N'akụkụ atọ bụ quays na sara mbara promenades nchọ ukwuu n'ime narị afọ nke 18 na mbụ n'ụlọ nkwakọba.
O yiri ka ọ fọrọ nke nta onye ọ bụla n'ime ndị a nwere a Cafe, azụ restaurant, ma ọ bụ mmanya na ya n'ala, na n'èzí aba otú ị pụrụ ịhụ ná ndụ a na enchanting obodo-emeghe ka ị ara na ilekọta a pastis.
Industrylọ ọrụ na-eme ogologo oge site na ọdụ ụgbọ mmiri nke oge a ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri na ugwu, na ọtụtụ ndị na ụgbọ mmiri na ochie n'ọdụ ụgbọ mmiri bụ maka obi ụtọ.
Ma ọnụ Quai des Belges, ọhụrụ catch ka na me mbenesụk na-ere na azụ ahịa site na mmiri kwa-ututu.
Isbọchị a site na Paris ka akwadoro iji ụgbọ okporo ígwè rụọ.
Nnukwu ụlọ ụka Senti nke Anyị Lady nke Nche
Ọ bụ ike na-atụ uche nke a ncheta ebili n'elu skyline n'ebe ndịda nke Old Port.
Ọ bụ a narị afọ nke 19 neo-Byzantine ụka 150 mita n'elu mmiri, na a nnukwu ọlaedo akpụrụ akpụ nke Virgin na Child na n'elu ya elu-elekọta Marseilles Maritime obodo.
E okpukpe ebe nsọ na ukpeme na La garde ruo ọtụtụ narị afọ, na nnukwu ụlọ ụka Senti agụnye ala etoju nke a Renaissance nkera na-gụnyere a uka.
Ọrịrị na-ekwesịghị iwere ka ejighị na n'oge okpomọkụ, ma na e nwere ihe a njem nleta ụgbọ okporo na-apụ apụ mgbe nile si Old Port.
Ọ baghị uru ikwu, na mma si n'ebe a bụ agha-buru àmà.
Paris na Marseilles site Train
Marseilles dị 773 km n'ebe ndịda nke Paris. Paris na Marseilles Njem njem ụgbọ okporo ígwè dị mfe. Direct ụgbọ oloko si Paris na Marseilles ahapụ Paris Gare de Lyon maka njem nke 3.5 awa. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na-Marseilles on n'oge okpomọkụ ná ngwụsị izu anyị nwere ike ikwu ntinye akwụkwọ ndị gbaa ụgbọ okporo ígwè ọma tupu.
2. Gị Rouen (Normandy)
Odude site River ya, Rouen bụ njem njem ụbọchị site na Paris ma bụrụ isi obodo Normandy. Utu aha bụ "obodo nke 100 mgbịrịgba elu”. Rouen nwere a ọgaranya akụkọ ihe mere, na-akpali ngosi ihe mgbe ochie, na ezi gastronomy.
Rouen bụ otu n'ime kasị mara mma obere 5 kacha mma ụbọchị njem gaa ụgbọ okporo ígwè si Paris. Ruru ya adịghị anya si isi obodo (126 km), ọtụtụ ndị gara Rouen na ụbọchị njem si Paris ma nke a bụ a obodo na kwesịrị karịa a awa ole na ole.
Ma na ị chọrọ ịhụ ụfọdụ botanical gardens, nwere a isi nke inyocha inyefe ugwu nta nke Normandy region, ma ọ bụ nanị chọrọ snap ụfọdụ cityscapes (zuru ezu na osisi-gosikwa facades), e nweghị ịgọnahụ na Rouen bụ incredibly mara mma!
N'akụkọ ihe mere eme, obodo e ọma akwukwo maka inwe a fabulous art idaha, ihe nke ka ezi ta. N'oge narị afọ nke 20, amasị nke Claude Monet, nakwa dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, Ekwuru na obodo na ọbụna mmụọ nsọ agba obodo.
ugbu a, ọtụtụ n'ime Rouen si n'okporo ámá anọgide pedestrianized, nke pụtara na a mkpagharị site n'obodo n'ezie ele akin ka n'itinyekwu azụ na oge. Ọ dịghị ụgbọala, cobbled Lanes, a ọdụ ụgbọ mmiri ebe, na ọbụna ihe ochie district: ihe na-agaghi ahu n'anya? Gaa na Rouen n'oge June-Septemba ma a ga-enyekwa gị ọkụ na-akwụghị ụgwọ ngosi na katidral mgbe anyanwụ dara na mgbede na -abata.
Paris na Rouen site Train
Rouen dị 126 km si Paris. Paris na Rouen Njem njem ụgbọ okporo ígwè dị mfe. Azụ Paris na Rouen ezumike Paris Saint Lazare Train Station hour obula. The njem na-ewe 1h 15 min ka 1h 45 m, dabere na ụgbọ okporo ígwè.
3. Gị Lyon (Auvergne - Rhône Alpes)
Lyon, nke atọ kasị ukwuu obodo na France, bụ otu nke n'elu obodo ileta na France. The obodo a maara nke ọma n'ihi na ya na àgwà nke ndụ, a mara mma nketa si Roman ugboro Contemporary ije, na ezi gastronomy.
Gịnị mere i kwesịrị ịga leta Lyon?
Lyon bụ otu n'ime kasị mma obodo France, na dị ka ndị dị otú ahụ nwere ọtụtụ ihe ndị na-eme na-enwe. Fourbiere Hill na-enye mara mma panoramic echiche nke obodo ma ọ bụ na a akwa ebe na-amalite gị nleta. Explore Vieux Lyon, obodo akụkọ ihe mere eme na etiti na ya na-eti obi, na-akpali mmasị ochie na Renaissance ije na a mma ikuku. Mgbe na a uto nke Lyon si aha ọjọọ nri, ọ bụ oge isi na Peninsula (Lyon mmiri dị n'osimiri-agbụ dịịrị banye na mmiri) n'ihi na ihe mara mma ije na ụfọdụ mma shopping.
Paris na Lyon site Train
Lyon dị 463 km si Paris, a ụbọchị njem si Paris ga-ịme ka ị nke abụọ-kasị ukwuu na obodo na France nke bụ nnọọ ihe dị iche iche karịa Paris. Paris na Lyon Njem njem ụgbọ okporo ígwè bụ ngwa ngwa. Azụ Paris na Lyon ezumike Paris Gare de Lyon hour obula maka a njem nke gburugburu 2 awa, dabere na ụgbọ okporo ígwè.
Marseilles ka Lyon Ụgbọ oloko
4. Gị LA ROCHELLE (ọhụrụ Aquitaine)
LA ROCHELLE na ya àgwàetiti ndị a obodo nke ihe karịrị otu puku afọ tụgharịa kwupụta n'ọdịnihu! Dị n'ebe obi nke Atlantic seafront, obodo ka gbanwee ya Maritime isi n'ime a akụ na ụba, njem nlegharị anya, na ọdịmma ọdịbendị, ma na-ya pụrụ iche mara mma.
Mere ị ga-gaa na La Rochelle?
Site Old Port, onye nwere ike na-enwe mmasị na ebube elu, ẹkekpemede nke obodo. Ihu na Atlantic, ha na-na na-agba àmà ike na akụ na ụba nke La Rochelle site na narị afọ. Ndị a Maritime wusiri ike, wuru na Middle Ages na taa nkewa dị Historical ncheta, kwụpụta mgbe ị gara na La Rochelle. Na nke ọ bụla n'akụkụ nke na ọdụ ụgbọ mmiri n'ọnụ ụzọ, na Saint-Nicolas Tower, na Tower nke Chain na jikọọ na ya site na a mgbidi. N'ikpeazụ, n'ebe ahụ bụ Tower nke na-ejegharị, n'oge gara aga, a ísìsì na mkpọrọ.
Gaa Leta ile de Re:
The Bois-Plage-en-Re emi odude ke South Coast nke agwaetiti bụ otu n'ime ndị kasị ochie seaside ntụrụndụ na France. Open n'oké osimiri, obodo bụ mpako nke àgwà ya osimiri. Ọ e ọdịda nke Blue Flag 2015 (a akara nke ezi ihe nlereanya coastlines). Gaa Leta obodo site ya asọfe alleys na n'okporo ámá, ezigbo lined na hollyhocks si May ka September.
Paris na La Rochelle site Train
La Rochelle dị 469 km si Paris. Paris na La Rochelle njem njem ụgbọ okporo ígwè dị mfe. Direct TGV ụgbọ oloko na La Rochelle ahapụ Paris Gare de Montparnasse na ejikọta Paris na La Rochelle na naanị 3 awa.
5. Anyị ikpeazụ Choice na Njem Iji Njem Site Train DEAUVILLE (Normandy)
Deauville-achọta na Normandy n'ụsọ oké osimiri, dị n'akụkụ Trouville na ndịda ọdịda anyanwụ nke Honfleur. Otu akụkụ nke 'Normandy Riviera' Deauville bụ obodo mara mma dị n'akụkụ osimiri. Ọ nwere oké osimiri, nnukwu ụlọ, nnukwu ụlọ ahịa, na-eme kwa afọ film ememme. Ghara ikwu aha ya ama ama, egwuregwu golf yana cha cha. Gịnị ọzọ nwere ike ị chọrọ?
Deauville bụ ezigbo onye mgba maka njem otu ụbọchị site na Paris, bidoro ndụ dịka ọhụụ nke nwa nwanne Napoleon nke atọ. Si n'akụkụ obodo nke Trouville, o lere anya gafee ala mmiri na ọdọ mmiri wee kpebie ịrụ ụzọ ịgba ọsọ. Elegant villas were built between the race track and the sea and Deauville was born.
Ọ bụ ezie na ibido tọrọ ntọala na mepụtara na narị afọ nke 19, ọ bụ ná mmalite narị afọ nke 20 na nke abụọ ife nke mmepe ada itie ke Deauville. Nke a gụnyere ma ama boardwalk n'ụsọ oké osimiri, ọkaibe cha cha, na nnukwu hotels. The Hotel Normandy na Royal Hotel, na golf N'ezie.
Paris na Deauville site Train
Deauville emi odude 220 km n'ebe ọdịda anyanwụ nke Paris. Paris na Deauville Njem njem ụgbọ okporo ígwè bụ n'ezie mfe. Direct ụgbọ oloko si Paris na -aga Deauville Paris Saint Lazare ọdụ ụgbọ okporo ígwè hour obula na ụgbọ okporo ígwè na njem dịruru 2 awa.
Rouen na Lille Ụgbọ oloko
kwuo ee (Ee na French) na 5 kacha mma ụbọchị njem si Paris na-eme njem na ụgbọ oloko na enyemaka nke Save A Train! Ọ dịghị extra, zoro ezo ụgwọ, nweghị nsogbu oge. dị nnọọ fun!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Day Njem Iji Njem Site Train Site Paris” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-travel-train-paris%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / ru na / de ma ọ bụ / nl na ndị ọzọ asụsụ.
#daytrip #FrenchHolidays #paristrips #quicktrips #tripsfromparis europetravel longtrainjourneys ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel